सार्वजनिक रूपमै नेताहरूबीच घोचपेचः सत्तारूण नेकपाकाे एकता कहाँ पुग्याे ?::mirmireonline.com
सार्वजनिक रूपमै नेताहरूबीच घोचपेचः सत्तारूण नेकपाकाे एकता कहाँ पुग्याे ?
काठमाडाैं, ३ जेठ ।
नेकपाले जनताको जनवादलाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाउने बताएको थियो। तर, तत्कालीन दुई धारका नेताहरुबीच कार्यदिशाका सन्दर्भमा विवाद टकराउन थालेको छ। बुधबार मात्रै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलबीच सार्वजनिक कार्यक्रममै घोचपेच भएको थियो। अन्नपूर्णपाेष्ट